Sheekh Shariif oo Muqdisho kusoo laabtay, dalab culusna u diray hay’adaha amniga | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Sheekh Shariif oo Muqdisho kusoo laabtay, dalab culusna u diray hay’adaha amniga
Sheekh Shariif oo Muqdisho kusoo laabtay, dalab culusna u diray hay’adaha amniga
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, ahna hoggaaminaya Madasha Qaran ee Xisbiyada mucaaradka ayaa maanta ku laabtay magaalada Muqdisho, kadib muddo laba bilood ah oo uu ku maqnaa Imaaraadka Carabta, kadibma soo maray dalka Kenya.
Isagoo xaruntiisa kula hadlayey taageerayaal soo dhoweeyay ayuu sheegay inay wax lada xumaado tahay xaaladda Amniga caasimadda oo dadku aysan Caruurtoodii banaanka u bixi karin cabsi laga qabo in la afduubto oo xubnahooda la iibsado, iyadoo markii hore ay jiray cabsi amni oo ku saabsan Al Shabaab.
“Hay’adaha Amniga waxaan ugu baaqeynaa inay shaqadooda qabsadaan oo waajibaadkoodu gutaan, kuna mashquulin shaqooyinka aan loogu talogelin.” ayuu yiri Sheekh Shariif oo sidoo kale ka hadlay dhibaatooyinka kufsiga ee soo noqnoqday.
Sheekh Shariif ayaan soo hadal qaadin arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda, isagoo muddo dheer ka maqnaa caasimadda.